Monk Font Design Typeface - Umagazini Design
Design Typeface Imonki ifuna ukulingana phakathi kokuvuleleka nokuba semthethweni kwama-serifs wobuntu bomuntu kanye nomlingiswa ovame ukwenzeka ngaphezulu kweseragi eyisikwele. Yize ekuqaleni yaklanywa njenge-typeface yesiLatini kwanqunywa kusenesikhathi ukuthi idinga inkhulumomphendvulwano ebanzi ukufaka inguqulo yesi-Arabhu. Kokubili isiLatin nesi-Arabhu kusiklama umqondo ofanayo nomqondo wejometri eyabiwe. Amandla enqubo yokuqamba efanayo avumela izilimi ezimbili ukuba zibe nokuvumelana okulinganayo nomusa. Kokubili ama-Arabhu nesi-Latin asebenza ngokuhlangana ngaphandle kokuhlanganyela ngokuhlanganyela ukubala, isiqu sokuqina, nezindlela ezigobile.
Igama lephrojekthi : Monk Font, Igama labaklami : Paul Robb, Igama leklayenti : Salt & Pepper.
Design Typeface Paul Robb Monk Font